Vanadium Aluminium Alloy, V-Al - Goodao Technology Co, Ltd.
Vanadium aruminiyamu chiwanikwa rudzi rwemberi alloy zvinhu zvinoshandiswa zvakanyanya mumunda weaerospace. Vanadium aluminium alloy is a intermediate alloy ine hushoma hunyoro hwe1600 ℃ (inosanganisira V40%). Inonyanya kushandiswa sechinhu chinowedzera che titanium alloy, superalloy uye mamwe akakosha alloys. Iyo ine kuomarara kwakakwirira, kusimba, kuramba kwemvura yegungwa uye kureruka, inoshandiswa kugadzira ngarava dzegungwa uye glider dzemvura. Vanadium aluminium alloy chitarisiko isirivheri-grey simbi inoyevedza block. Nekuwedzera kwevanadium zvemukati mune chiwanikwa, iyo simbi kubwinya kwakawedzerwa, kuomarara kwakawedzera uye zvemukati zveoksijeni zvakawedzera.
Vanadium aruminiyamu chiwanikwa chikumbiro:
Vanadium aruminiyamu chiwanikwa rudzi rwemberi alloy zvinhu zvinoshandiswa zvakanyanya mumunda weaerospace. Iine kuomarara kwakanyanya, kusimba, kuramba kwemvura yegungwa uye kureruka. Iyo inoshandiswa kugadzira seaplane uye waterglider. Nyika shomanana chete pasi, senge United States neGerman, ndidzo dzakawana kugadzirwa kwemaindasitiri.
Pashure: Zirconium Aluminium chiwanikwa, Zr-Al
Zvadaro: Zirconium iron alloy, Zr-Fe
Vanadium aruminiyamu chiwanikwa upfu
Vanadium aluminium alloy powder Mafekitori
Vanadium aruminiyamu chiwanikwa upfu Fekitori
Vanadium aluminium alloy powder Mugadziri
Vanadium aluminium alloy powder Vagadziri
Vanadium aruminiyamu chiwanikwa upfu Mutengo
Vanadium aruminiyamu chiwanikwa upfu Quotes